China High mmepụta atọ wavelength 755 808 1064 ntutu mwepụ mmanya micro ọwa diode laser rụpụta na Factory | Danye
High mmepụta atọ wavelength 755 808 1064 ntutu mwepụ mmanya micro ọwa diode laser
Germany lasers, na-akparaghị ókè gbaa n'oge akwụkwọ ikike; Micro-channel diode laser, ọkachamara mwepụ ntutu usoro; Ike dị elu, mmezi dị mma, ogologo oge ndụ, nke a na-ewu ewu na ụlọ ọgwụ;
Usoro a jiri ogologo ntutu mwepụ nke 755 808 1064nm diode maka ịbanye miri emi n'ime dermis ebe ntutu isi dị. Na usoro ọgwụgwọ, usoro nke ịsụ asụsụ dị nro, nkwughachi nkwughachi dị elu na-eme ka ọnọdụ ntutu isi nke ntutu isi na nke gbara ya gburugburu dị elu, anụ ahụ na-edozi ahụ ruo ogo 45 Celsius. Nnyefe nwayọ nwayọ nwayọ na-eji chromophores n'ime anụ ahụ gbara ya gburugburu dị ka ihe nchekwa iji mee ka ntutu dị ọkụ. Nke a, tinyere ike ọkụ nke na-etinye aka na ntutu isi, na-emebi follicle ma gbochie uto.
808nm diode laser igwe dị irè karịsịa na ntutu isi melanocytes na-enweghị mmerụ gburugburu anụ ahụ.The laser ìhè nwere ike etinye obi gị dum site na ntutu ntutu na follicles ntutu na melanin, ma ghọọ okpomọkụ, si otú na-amụba ntutu follicle okpomọkụ. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-ebuli elu nke ukwuu iji mebie emebi usoro nke ntutu isi, nke na-apụ n'anya mgbe oge nke usoro usoro ọgwụgwọ nke ntutu nke ntutu isi wee mezuo nzube nke iwepụ ntutu na-adịgide adịgide.
Adị ntutu niile dị n'ahụ (ntutu na ihu, gburugburu egbugbere ọnụ, ajị agba, underarm, ntutu na ogwe aka, ụkwụ, ara na bikini)
2.laser akpụkpọ rejuvenation
Erdị laser Micro ọwa Diode laser
Ogologo ebili mmiri 808nm 755nm 1064nm mbuaha mbuba
Rụọ ọrụ panel 15 inch agba LCD ihuenyo mmetụ
Abù size nke handpieces 12 * 12mm
Ọnọdụ nnyefe Soprano ice kpọmkwem sapphire njikọ
Input Ike nke ngwaọrụ 3000W
Ọnọdụ ngwa ngwa (FHR):
Njupụta ike 5-10J / cm2 mgbanwe
Ugboro ugboro 10Hz
Professionalkpụrụ ọrụ (HR)
Njupụta ike 6-50J / cm2 mgbanwe site ofu usu obosara nso (Max.120J / cm2 dị)
Ugboro ugboro 1-5Hz na-agbanwe site na oke obosara
Obosara usu Nchekwa onwe
Jụrụ ụzọ Air + usoro mgbasa mmiri + semiconductor jụrụ
Jụrụ larịị sapphire na-eme ka ahụ dị jụụ na anụ ahụ na-adaba na 0 ~ -5 ℃
Igwe igwe L47cm * W44cm * H127cm
Nha ịbụ 48kgs
Expert otu na ihe karịrị afọ 15 nke nkà na ahụmahụ na ubi mara mma, na-elekwasị anya na-eke elu àgwà nke igwe na àjà zuru okè mgbe ahịa ọrụ maka ndị ahịa, nọgidere ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa izute ahịa ina; OEM na ODM ọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko egbula
Anyị ga-enwe ọtụtụ ọkachamara
ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa iji zaa ajụjụ gị
Nke gara aga: epilacion laser ipl ufiop usu ìhè laser epilation mma igwe price DY-B1
Osote: Na-adịgide adịgide micro channel 808 755 1064 laser diodo milesman ntutu mwepụ DY-DL811
Na-adịgide adịgide Micro ọwa 808 755 1064 laser diod ...